LLC "Agrofirma KRiMM" dia iray amin'ireo mpamokatra sakafo sy ovy voa ary legioma malalaka any Russia. Tamin'ny taona 2020, 162 taonina ny fijinjana ny vokatra. Ankoatr'izay, ny toeram-pambolena dia mamboly voamadinika, voadio ary salady. Ny velaran-tany voafafy rehetra dia mihoatra ny 822 hekitara. Ny orinasa dia misy kompania robotic amin'ny famenoana sy ny fonosana fonosana, ny tsipika fanasana / fanadiovana vokatra legioma, ny trano fivarotana legioma lehibe indrindra any Russia misy efitrano fampangatsiahana ary laboratoara tsy manam-paharoa maniry ny ovy "SoKar" (ovy varietal), nankatoavin'ny ny Ivotoerana fambolena rosiana, izay manome masomboly elitika ho an'ny orinasa: manomboka amin'ny fahazoana minitra avy amin'ny zavamaniry fantsom-panafody ka hatramin'ny vokatra vita.
Izany no mahatonga ny orinasam-pambolena "KRiMM" miantehitra amin'ny famolavolana safidy sy fitarihana famokarana masomboly amin'ny sehatra eropeana, mahavita mifaninana tsy amin'ny eto an-toerana ihany fa amin'ny tsena any ivelany koa.
Fitaovana iray lehibe manandanja ihany koa ny ozinina fanodinana ovy. Ity tetik'asa tsy manam-paharoa ity dia tsy misy fampitahana amin'ny faritry ny Federasiona Rosiana. Ny fahaiza-manao fanodinana isan-taona dia vokatra 15 taonina vita, na ho an'ny filan'ny famokarana na ho an'ny antsinjarany ary ho an'ny sehatry ny HoReCa sy B000B. Ny zavamaniry dia manana tsipika avo lenta izay mamokatra vokatra ovy manaitaitra toy ny ovy pasteurized miaraka amin'ny additives voajanahary miaraka amina talantalana hatramin'ny 2 andro eo ambanin'ny marika Half-Cooked, ary Fresh Cut - ovy voahidy vaovao miaraka amina talantalana hatramin'ny 60 andro. Ho an'ny famokarana azy, karazana ovy voafantina manokana misy tsiro tsara no ampiasaina.
Agrofirma KRiMM LLC dia nandroso tamina ambaratonga vaovao amin'ny famolavolana famokarana rafitra rafitra nandritra ny 20 taona. Niorina tamin'ny taona 1999 miorina amin'ny fiompiana tantsaha "Niva", ankehitriny ny orinasa dia iray amin'ireo fananana fambolena lehibe indrindra amin'ny fambolena ovy sy legioma tsy any amin'ny faritr'i Tyumen ihany, fa koa any Russia. Tamin'ny voalohany, ny asa fambolena dia nifototra tamin'ny fitsipiky ny specialization sy ny fifantohana, ny fampiharana ny zava-bitan'ny fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, ny fifaninanana ny mari-pahaizana ara-toekarena sy kalitaon'ny vokatra vita.
Androany ny orinasa mpamboly dia mampiasa ny zava-bita voafantina tsara indrindra, mampihatra ireo haitao mandroso indrindra amin'ny fitomboan'ny voa sy ny legioma, ny maodely farany an'ny milina sy fitaovana manokana. Ohatra, ao amin'ny laboratoara SoKar amin'ny dingana rehetra amin'ny fampielezana ovy voa, ny fanaraha-maso kalitao dia tanterahina amin'ny alàlan'ny famakafakana PCR (valiny polymerase chain), ary koa ELISA (andrana amin'ny hery fiarovana amin'ny ati-doha. Ny laboratoara dia mamokatra zavamaniry fantsona fitiliana 1 isan-taona hahazoana 000 minitubers. Vokatr'izany, ny fanangonana ovy ao amin'ny toeram-pambolena dia misy karazany 000 - Rosara, Zekura, Karatop, Gala, Innovator, Lux, Bravo, Red Scarlett, sns.
Ny faritra ambanin ny ovy voa dia mihoatra ny 950 ha, 27 t / ha ny salanisa vokarina.
Ny fanavaozana tena lehibe indrindra amin'ny teknolojia amin'ny famokarana vokatra vokatra ao amin'ny orinasa mpamboly "KRiMM" dia ny fampiroboroboana ny rafitra fiompiana marina.
Ny tanimboly dia manana velaran-drano 2500 hektara. Manara-maso matetika ny hamandoan'ny tany ny manam-pahaizana ary tonga amin'ny fanatsoahan-kevitra fa ny fanondrahana dia siansa iray manontolo. Andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana teknolojia vaovao eo amin'ny orinasa ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fambolena ny tany, ny asidra azy - indrindra rehefa mamboly ovy sy laisoa.
Isan-taona dia misy ny hetsika atao eo amin'ny sahan'ny Agrofirm hanatsarana tsara ny firafitry ny tany, ho an'ireo tanjona ireo amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ka hatramin'ny 500 taonina (!) Ny peat isaky ny 1 hektara no entina.
Noho ireo fanavaozana ireo, na dia ao anatin'ny taona sarotra aza, dia mahazo valiny maherin'ny 150 100 taonina ny fambolena. Nandritra izay telo taona lasa izay, ny fijinjana ovy dia mihoatra ny 000 648 taonina hatrany! Zava-dehibe ny fampiasan'ny Agrofirma ny voan'ny sokajy "Elite" amin'ny fambolena ovy azo amidy. Izany dia ahafahana mampitombo ny fahaizan'ny famokarana, manatsara ny toe-pahasalaman'ny mpiasa, ary misy XNUMX (!) Amin'izy ireo ankehitriny ary manome serivisy ho an'ny mpanjifa kalitao.
Ny paikady voafantina, ny asa mafy ataon'ny ekipa, ny fampiasam-bola mavitrika dia nitondra ny orinasam-pambolena "KRiMM" ho amin'ny sehatra manerantany amin'ny famokarana voly ary miantoka ny fahafaham-po amin'ny fitomboan'ny fitakian'ny mpanjifa. Androany, ny vokatr'ilay orinasa dia atolotra any amin'ny faritra maro any Russia: hatrany Kaliningrad ka hatrany Vladivostok, ary koa any amin'ireo firenena CIS sy Serbia.
Tags: Agrofirm KRiMMfamokarana ovy sy latabatra
Ny vokatra avy amin'ny Agrofirm "KRiMM" dia nekena ho vokatra tsara indrindra tamin'ny taona 2020 tany amin'ny faritr'i Tyumen
Ovy nopetahana "Slices in a peel" sy betiravy nandrahoina "Sterilized" amin'ny fonosana banga novokarin'ny Agrofirm "KRiMM" no nahazo ny loka tamin'ny fifaninanana "Ny entana tsara indrindra ...
Orinasa fanodinana ovy
Ny solontenan'ny filoham-pirenenan'i Russia ao amin'ny Distrikan'i Urals Federal dia nitsidika ny orinasa mpanodina ovy an'ny orinasa mpamboly "KRIMM". I Vladimir Yakushev, ary koa ny governora ...
Ny zava-kanto vaovao natokana ho an'ny ovy dia niseho tao amin'ny faritra Tyumen
Agrofirm "KRiMM" dia nahafaly ny mponina sy ny vahinin'ny tanànan'ny Uporovo tamin'ny singa fanatsarana tsy mahazatra. Eo amin'ny fidirana amin'ny trano fanatobiana ny orinasa dia afaka mahita mahavariana ianao izao ...
Ovy dia ovy ao amin'ny faritra Tyumen
Sampana Uporovskiy an'ny LLC "Agrofirma" KRiMM "dia nanomboka nanangona ovy voalohany, izay nibata 80 hektara. Amin'ny ankapobeny amin'ity taona ity ...
Kalitao masomboly Rosiana kalitao avo lenta!
Ao amin'ny Faritany Krasnoyarsk, fivoriana amin'ny fivoriana "Andron'ny tanimbary"